ဒူဘိုင်း နှင့် အဘူဒါဘီ အရှိဆုံးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ခရီးသွားဧည့်ဦးတည်ရာ, ဒါကြောင့်ဒီမှာအတွက်စျေးအကြီးဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဟိုတယ်များမှာ ယူအေအီး ။ ဒီနေရာတွင်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်ပျူငှါနွေးထွေးသောစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဟိုတယ်ကျော်ကြားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဟိုတယ်လုပ်ငန်းများတွင်နေထိုင်ရန်ဒေသခံတစ်ဦးဟိုတယ်ကွင်းဆက်နေလို့ရပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျလုံခြုံစွာဝန်ဆောင်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်စျေးနှုန်းများ၏ကျယ်ပြန့အပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ပိုင်နက်တွင်ဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသော 3-4-5 ကြယ်ကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အဟောင်းမြို့ 1-2 ကြယ်များနှင့်အတူထိုအရပ်တို့၌ရှိပါတယ်၏ကျယ်ပြန့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားယူအေအီးအားလုံးကိုဟိုတယ်သုံးခုကိုအဓိကအုပ်စုများသို့ခွဲခြားထားတယ်:
ပင်လယ်တည်ရှိပြီးနှင့်ကမ်းရိုးတန်းမှပုဂ္ဂလိကဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေနှင့်အတူယူအေအီးအတွက်ခရီးသွားဧည့်ဟိုတယ်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာအမြဲတမ်းဦးဆောင်အနေအထားသိမ်းပိုက်။ သူတို့တစ်တွေကမ်းခြေအားလပ်ရက်များအတွက်လိုအပ်သမျှကို (နေရောင်ကုတင်, လက်သုတ်ပုဝါ, ထီး) နဲ့တပ်ဆင်ထားမသာပေမယ့်ကမ်းခြေပေါ်တွင်သူတို့ရေချိုးဝတ်စုံနှင့်အပြုအမူအပေါ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်မည်သည့်ကန့်သတ်ပြဌာန်းကြပါဘူး။
သူတို့ကကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသောနေကြတယ်ပေမယ့်အရာ, ဟိုတယ်များ, ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေလက်လှမ်းမရှိကြပါဘူး။ နာမည်ကျော်ယူအေအီးဟိုတယ်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးသောတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာခရီးသွားဧည့်တွေအများကြီးအမြဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များအတွက်ကမ်းခြေကိုခံစားနိုငျသော beachfront အပေါ်ညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူသဘောတူ။
ဝေးကမ်းရိုးတန်းမှသည်စီးတီးဟိုတယ်ကို။ သူတို့ဟာပင်လယ်ကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအကွာအဝေးမှာတည်ရှိနေကြပြီး, ပုဂ္ဂလိကကမ်းခြေနှင့်အတူအများပြည်သူကမ်းခြေလွန်းဝန်ဆောင်မှု, ဒါမှမဟုတ်မြို့ပန်းခြံစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ဧည့်သည်များ, ပင်လယ်မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူယူအေအီးမတူဘဲ, မြို့ပြဟိုတယ်ဧည့်သည်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စရိတ်မှာသီးခြားစီကမ်းခြေဆက်စပ်ပစ္စည်းဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။
ယနေ့အထိ, ဤနိုင်ငံဟိုတယ်မိသားစု, လူငယ်နှင့်စီးပွားရေးအဘို့အတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်ဝေယူနိုင်ကြမရှင်းလင်းသောစံရှိပါတယ်။ ယူအေအီး4သို့မဟုတ်5ကြယ်များကိုအကောင်းဆုံးဟိုတယ်အကြားရွေးချယ်ခြင်း, သင်ကဲ့သို့သောညွှန်ကိန်းများအပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ်:
ဒေသခံဟိုတယ်ရှုပ်ထွေးသောတှငျနထေိုငျ၏ကုန်ကျစရိတ်စော်ဘွား၏လူကြိုက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကောင်းတစ်ဦးဘတ်ဂျက်ဟိုတယ်များယူအေအီးစော်ဘွားအတွက်တည်ရှိသည် Ras Al-Khaimah ၏ နှင့် Fujairah ဒူဘိုင်း - သည်, ဝေးအဓိကမြို့ဆွဲဆောင်မှုကနေ။ အဆိုပါပိုမိုနီးကပ်စွာကဟိုတယ်တစ်ခုကိုတှငျနထေိုငျ၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကြောင့် ဆွဲဆောင်မှု , စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများ မွို့၌တည်ရှိသည်။
ဟိုတယ်များ၏အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့် ပတ်သက်. ကခရီးစဉ်၏ရည်ရွယ်ချက်၏အခြေခံပေါ်မှာအကဲဖြတ်ရပါမည်။ နှင့်အတူဟိုတယ်များအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဥပမာ, ကလေးတွေနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်နေ တဲ့ရေပန်းခြံ site ပေါ်တွင်။ ဒါကမိသားစုခံစားရန်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် အားလပ်ရက် တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်လတံ့သော။ အတူတူအောင်မြင်မှုနှင့်အတူကသားသမီးရဲ့အပန်းဖြေစုစည်းဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့, ကာတွန်းနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်များရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ယူအေအီးအတွက်အားလပ်ရက်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံနှင့်လူငယ်စုံတွဲများကြိုက်တတ်တဲ့။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာယူအေအီး spa ဟိုတယ်များနေ။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခုကမ်းခြေအားလပ်ရက် ယူ. , ကိစ္စ္စအမျိုးမျိုးများအတွက်အနှိပ် sign up ကို, ဒါမှမဟုတ်ဗတ်၏ tsvetoprotsedury အများအပြားအမျိုးအစားများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ တောင်တစ်မိနစ်အဘို့ကိုရပ်တန့်မဖျော်ဖြေရေးအတွက်ယူအေအီးလူငယ်ဒစ္စကိုအတွက်ပါတီများနှင့်တွေကတော့မရွေးဟိုတယ်များ၏ပရိသတ်များ။
အပန်းဖြေအားလပ်ရက်လိုအပ်နေခရီးသွားဧည့်, သငျသညျနိုငျငံ၏အစွန်းရောက်အနောက်ဘက်ကိုသွားသင့်ပါတယ်။ Marbella Resort & ပင်လယ်ကွေ့ကျော်နေဝင်ချိန်ကြည့်နေစဉ်သင်အပန်းဖြေအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနိုင်မည့်ရွှေ Tulip အယ်လ် Jazira - ဒီမှာအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်များ, ဘန်ဂလိုများတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ကြသည်။
အဘူဒါဘီ။ အဆိုပါအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးကွဲပြားခြားနားဟိုတယ်အခြေခံအဆောက်အဦများအဘူဒါဘီအတွက်ကိုယ်စားပြုနေသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအတုတောင်ပို့ပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြအဖြစ်ဒေသခံဟိုတယ်, ယူအေအီးအတွက် greenest စဉ်းစားမရပါ။ သို့သော်ဤနေရာတွင်သင်ကဇိမ်ခံရွက်လှေများနှင့်အတူဆိပ်ခံတံတားတစ်ခုမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူဟိုတယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ် "ဖော်မြူလာ 1" ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်း။ အဘူဒါဘီကိုအောက်တွင်ပြသထားပါသည်ဓာတ်ပုံရာ၏ယူအေအီးအတွက်အကျော်ကြားဆုံးဟိုတယ်များနေသောစော်ဘွား, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်ပြီးနောက်။ အကျော်ကြားဆုံး Rixos အဆိုပါအုန်းဒူဘိုင်းနှင့် Atlantis အဆိုပါအုန်းများထဲတွင်။ ယူအေအီးအတွက်အများဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုအတုပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း အုန်း Jumeirah ၏ကျွန်း ။ သူကတောင်အာကာသကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သောတစ်ဦးဖြန့်စွန်ပလွံပင်၏ပုံစံအတွက်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့၏အလယ်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ - ဒူဘိုင်း၌အခြားသောအတုကျွန်းတွင်အခြားလူကြိုက်များဟိုတယ်, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ် Burj Al Arab, ဒါမှမဟုတ်ရွက် ။ သူက 270 မီတာကမ်းနားကနေပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့၏အလယ်၌ရပ်။ အဘယ်သူမျှမလျော့နည်းစိတ်ဝင်စားဖို့အတွက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်များမှာ ဒူဘိုင်းရဲ့ Deira ခရိုင် ။
Ras Al-Khaimah ။ လှပသောရှုခင်းနှင့်တစ်ဦးအကြီးအကမ်းရိုးတန်း - ထိုစော်ဘွားများ၏ထူးခြားသော features တွေ။ ဒါဟာဒူဘိုင်းကနေတွေအကြောင်း 130 ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ယူအေအီးအတွက် Ras Al-Khaimah အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုမှာ "အစွန်းရောက် olinklyuziv" ၏နိယာမအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည် Rixos Bab Al-Bahr ဖြစ်ပါတယ်။
Fujairah ။ Khaimah အေးတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်လူသိများဒါကြောင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များကွဲပြားခြားနားနှင့်အပန်းဖြေဖြစ်ပါသည် - စိတ်ဝင်စားဖွယ်။ Fujairah အတွက်အကျော်ကြားဆုံး5ကြယ်ပွင့်ဟိုတယ်များ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, All-အားလုံးပါဝင်နိုင်အလုပ်လုပ်ဖြစ်ကြ၏:
သည် Le Meridien အယ်လ် Aqah;
Miramar အယ်လ် Aqah;
ရှိတဲ့ Radisson Blu Fujairah;
သူတို့ကိုတှငျနထေိုငျ၏ကုန်ကျစရိတ်တစ်ည $ 107-165 ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်များစွာသောအခြားဟိုတယ်များကဲ့သို့ပင်စျေးနှုန်းအားလုံးအစားအစာများ, အရက်နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါဝင်သည်။
Sharjah ။ ဒီအဆုံးရန်, စော်ဘွားပိုပြီးတင်းကြပ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် ဥပဒေများ , ဒါပေမယ့်ဒီကြားမှကြောင့်ပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်အကြားအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ Sharjah အတွက်ကမ်းရိုးတန်းဟိုတယ်အယ်လ် Khan ကကျွန်းဆွယ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
Ajman ။ ဒါဟာ 1-1.5 နာရီဒီကနေမောင်းထုတ်ရန် Sharjah နှင့်ဒူဘိုင်းမှအနီးကပ်တည်ရှိသည်။ 1 ကမ်းရိုးတန်းပေါ်မှာဆန့်ရသောကမ်းခြေ Kempinski ဟိုတယ်လူသိများယူအေအီးအုပ်စုထဲမှာ Ajman ။
ယူအေအီးခုနှစ်တွင်ဟိုတယ် $ 80-250 တစ်သိုက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကိုစစ်ဆေးနေပြီးနောက်, သင်န်ဆောင်မှုအတွက်ပေးချေ, အဲဒီနောက်ကျန်ရှိသောပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
2014 ခုနှစ်ကတည်းကယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်အခြေချခရီးသွားဧည့်, သူကအရာများ၏ပမာဏနေထိုင်များ၏ဟိုတယ်အမျိုးအစားနှင့်အရှည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, အခွန်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အခွန်အခြေချ၏နေ့၌တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ကဖက်ရှင်စားသောက်ဆိုင်ဒါမှမဟုတ်ယူအေအီး2ကြယ်ပွအတွက်ကျိုးနွံဟိုတယ်ရှိမရှိ၏, ထိုအခြေချ 15:00 သည်အထိထွက်ယူသွားတတ်၏။ အားလပ်ရက်ခွင့်ရဲ့အဆုံးမှာထွက်ခွာသွား၏နေ့၌ 12:00 သည်အထိဖြစ်သင့်သည်။
အရက် ယူအေအီးအတွက် Sharjah အတွက်ဟိုတယ်များအတွက်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ ဤသည်များစွာသောအခြားဟိုတယ်တိုင်းပြည်ရှုပ်ထွေးသော, ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်တှငျစစျမှနျသောဖြစ်ပါတယ်။
, အရက်မသောက်ရမှတားမြစ်ထားသည့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုလမ်းများ၌ဥပုသ်လ၏မွတ်စ်လင်အဘို့သန့်ရှင်းလစဉ်အတွင်းမီးခိုးသို့မဟုတ်ပင်စေးဝါး။ ဤနည်းဥပဒေကိုလည်းယူအေအီးဟလာလ်ဟိုတယ်များသက်ဆိုင်သည်။
မည်သည့်စော်ဘွားခုနှစ်တွင်ဟိုတယ်ပြင်ပမှာတချို့ရေကူးစည်များနှင့်ရေချိုးဝတ်စုံအတွက်သို့မဟုတ်ယင်း၏ခန်းမထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖို့တားမြစ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်ဤနေရာတွင်သင် topless နေပူထဲလို့မရပါဘူး။
အတော်များများလှည့်ခရီးသည်များလည်းခြေစွပ်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဟိုတယ်များတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ကိစ္စ, စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ အများစုကတော့ကသုံးတံသင်ရှိပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ဗြိတိသျှအမျိုးအစား«, G »၏ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကဟိုတယ် Adapter ကပေး။
ဟိုတယ်ကနေတဆင့်ယူအေအီးအတွက်ဗီဇာရဖို့ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားနေသောခရီးသွားများ, သင်သည်ဤယနေ့မဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းကိုသိသင့်ပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းကိုတိုက်ရိုက်မှာကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့မဟုတ်ခရီးသွားအေဂျင်စီများမှတဆင့်ဖြစ်စေပြီးသားအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းဆိုက်ရောက်သာတိုင်းပြည်အတွင်းရရှိနိုင်ပါသည် လေဆိပ် ။
2017 ခုနှစ်တွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိဒေသခံဟိုတယ်အစီအစဉ်၏အကြံပြုချက်မှာကလေးများ Go ကိုအခမဲ့ဖြန့်ချိရာအတွက်ယူအေအီးအတွက် 12 နှစ်အထိသားသမီးများ၏နေရာထိုင်ခင်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာသူတို့တက်ကြွစွာဆွဲဆောင်မှုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်, ခရီးစဉ်အပေါ် go, ဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပွုနိုငျနှင့်ခရီးသွားအေးဂျင့်များအားဖြင့်စီစဉ်ပေးသည့်အထူးလျှော့စျေးနဲ့ပရိုမိုးရှင်းအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အရာစဉ်အတွင်းမိသားစုတစ်စုလုံးနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းသွားလာလှည့်ခရီးသည်များလှုံ့ဆော်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား - ဆွဲဆောင်မှုများ
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား - ခရီးသွားလုပ်ငန်း
ပြည်ထဲရေး partitions ကိုလျှော
ဆလရီအမြစ် - စိုက်ပျိုးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
သားရေနဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့ Tools များ
ကမ်ဘာပျေါတှငျ saltiest ရေကန်
ကြေးနီဒင်္ဂါးပြားသန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်း - ကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ numismatists
အပြာရောင်ဘောင်းဘီ - အားလုံးအခါသမယများအတွက်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေ၏ရွေးချယ်ရေး
အဝတ်အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း 2017 - နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း